"Bilaa Ixtiraam Si Xun U Fikira" - Giorgio Chiellini Oo Raalligelin Bixiyey Weerarkii Uu Ku Qaaday Mario Belotelli - Gool24.Net
“Bilaa Ixtiraam Si Xun U Fikira” – Giorgio Chiellini Oo Raalligelin Bixiyey Weerarkii Uu Ku Qaaday Mario Belotelli
Halyeyga difaaca Juventus iyo xulka Talyaaniga ee Giorgio Chiellini ayaa raalligelin ka bixiyey weerarka afka ah oo uu ku qaaday Mario Balotelli, kaas oo uu si xun ugu aflagaadeeyey buug uu qoray oo dhowaan soo bixi doona.
Giorgio Chiellini oo ah kabtanka Juventus waxa uu ku eedeeyey weeraryahanka Brescia ee Mario Balotelli inuu yahay mid dhaqan xun oo u qalmayay in la dhirbaaxo intii ay socdeen ciyaaraha Koobka Qaaradaha ee 2013, markaa soo uu tilmaamay inuu ixtiraam darro u muujiyey ciyaartoyda iyo tababaraha oo aanu xattaa maalin kaliya caawinin.
“Balotelli waa qof taban (si xun u fikira) oo aan ixtiraamin kooda” Ayuu Giorgio Chiellini yidhi, laakiin Mario Balotelli oo jawaab ka bixiyey hadalkaas ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa in waxyaabahaas uu u sheego iyagoo is hor-jooga.
Giorgio Chiellini oo Salaasadii maanta waraysi siinayay barnaamijka Le lene oo ka baxa Italian TV ayaa waxa layaab ku noqday hadiyad uga timid Balotelli, taas oo ahayd shaadh uu dhabarka ka saxeexay oo uu usoo diray, waxaana ku qornaa: “Xattaa haddii si lama filaan ah aad dhabarka iiga toogatay, anigu wali waan ku jecelahay, ninkoow.”
Waxa kale oo qoraalka Balotelli uu intaa ku daray: “Waa markii ugu horreysay noloshayda ee aad i rabashto, aniguna aanan ku rabshin.”
Intaa kaddib, Giorgio Chiellini ayaa si xishood leh u hadlay oo raalligelin maldahan ka bixiyey wixii uu ka sheegay, waxaanu yidhi: “Waan kaa masayrsanahay! Sababtoo ah, noloshaada waxaad samayn kartaa qaladaad kaddibna horumar.”